Page2of 3	21. နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အမြန်တွေ့နိုင်ဖို့ UNFC စီစဉ်	(2017)
တိုင်းရင်းဒေသတွေမှာ စစ်ရေးပဋိပက္ခတွေ ပြေလည်ရေး UNFC ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် တို့ ဒုတိယအကြိမ် ပင်လုံညီလာခံမတိုင်ခင် ...	Created on 26 January 2017	22. သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲ ကျင်းပ	(2017)
... ဟိုက်ကူ ကဗျာဆရာ ဟာမန်ဗန်ရွမ်ပီက ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဆုကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဂုဏ်ပြုပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီနဲ့ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်း ဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သမ္မတဟောင်း ...	Created on 26 January 2017	23. UNFC အဖွဲ့ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ တွေ့ဆုုံဖို့ ဆုံးဖြတ်	(2017)
... အပါအဝင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရှေ့လုုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အဓိကထား ဆွေးနွေးဆုုံးဖြတ် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက် ၇ ပွင့်ဆိုုင်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဲဒီထဲမှာ အစိုးရ၊ ...	Created on 26 January 2017	24. TNP ပါတီက ပါတီတွေပေါင်း ထုတ်တဲ့ ကြေညာချက်မှာ မပါလို့ ထုတ်ပြန်	(2017)
... ပါဝင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလေ့လာသူ စာရေးရာ ဦးမောင်မောင်စိုးက နိုင်ငံသားမဟုတ်သူတွေကို ပြန်လည် လက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ ကောလာဟလ အဆင့်သာရှိသေးပြီး အစိုးရက ထုတ်ပြန်တာကို မတွေ့ရသေးကြောင်းနဲ့ တကယ်ပဲ အဲဒီအစီအစဉ်ရှိမယ်ဆိုရင် ...	Created on 25 January 2017	25. မလေးရှား ရိက္ခာသင်္ဘောအုပ်စုကို ရန်ကုန်မှာလက်ခံဖို့ မြန်မာ သဘောတူ	(2017)
... မလေးရှား မွတ်ဆလင် အန်ဂျီအိုအဖွဲ့တွေက ပြောထားပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ မလေးရှားသင်္ဘောအုပ်စုကို နိုင်ငံရေးနဲ့ လုံခြုံရေး အခြေအနေတွေအရ ရခိုင်ပြည်နယ်ကို သွားရောက်ထောက်ပံ့ခွင့်ပြုမှာ မဟုတ်ပေမယ့် ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းမှာပဲ ...	Created on 18 January 2017	26. ကရင်ပြည်နယ် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ	(2017)
ကရင်လူမျိုးတွေရဲ ့လူမျိုးအလိုက်အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့မှာ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီး ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ ကရင်ပါတီတွေ ကရင်လူထု အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ တက်ရောက်ကြပြီး ...	Created on 18 January 2017	27. NCA မှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေး အစိုးရနဲ့ တပ်မတော် လမ်းဖွင့်ပေးဖို့ KNU တောင်းဆို	(2017)
... ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရနဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေက စီစဉ်တဲ့ လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကို ကရင်ပြည်နယ်က စတင်ကျင်းပတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ...	Created on 18 January 2017	28. တမန်တော်နေ့ အခမ်းအနားမှာ မျိုးချစ်အဖွဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ပေးပြီး ကျင်းပ	(2016)
... ၊ ဟောပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေသည် နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေ ဒါမျိုးတွေ ဟောပြောခဲ့ တယ်ပေါ့နော်၊ အခုဒီပွဲမှာကျတော့ ဦးဇင်းတို့လည်း ဒီပွဲကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ ဦးဇင်းတို့လည်း နားထောင်ချင်တယ် လို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ ...	Created on 08 January 2017	29. ဦးမင်းဌေးကို ဖမ်းဆီးတာဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း ABSDF ခေါင်းဆောင်ပြော	(2016)
... ဦးမျိုးဝင်းက ပြော ပါတယ်။ ဦးမင်းဌေးဟာ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်နေသူဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ခုမှာ မြောက်ပိုင်းကော်မတီဝင်အနေနဲ့ တက်ရောက်ပြီးအပြန်မှာ ဒီဇင်ဘာလ ၂၈ ...	Created on 07 January 2017	30. နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ မိန့်ခွန်း	(2016)
... တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် ခံစားနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အနာဂတ်များပျောက်ဆုံးကာ အမှောင်ဖုံးခဲ့ရသည်မှာ စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာပင်ဖြစ်ပါသည်။" လက်နက်ကိုင်နည်းလမ်းဟာ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘဲ လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကို ...	Created on 04 January 2017	31. ကျင့်ဝတ်စောင့်ကြပ်ရေးအဖွဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ကန့်သတ်မယ့်အစီအစဉ် ကန်အောက်လွှတ်တော်ဖျက်	(2016)
လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေမှာ ကျင့်ဝတ်နဲ့ ညီညွတ်ခြင်း ရှိ မရှိ စုံစမ်းတဲ့ သီးခြားလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို ပြောင်းလဲ ကန့်သတ်မယ့် အစီအစဉ်ကို လွှတ်တော် စတင်တဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ ...	Created on 04 January 2017	32. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဲဆွယ်စည်းရုံး မပေးနိုင်တဲ့အတွက် NLD ပါတီ အားလျော့နိုင်	(2016)
... ဦးဝင်းထိန် က ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ နေပြည်တော်က ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှာ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၃ ပါတီ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေန... လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမှာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ...	Created on 03 January 2017	33. ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် ဆွေးနွေး	(2016)
လာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်မဲကို ဘောပင်နဲ့ အမှန်ခြစ် ပေးရမယ်လို့ ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ထွန်း က ပြောပါတယ်။ဒီနေ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ...	Created on 03 January 2017	34. ရုရှားအွန်လိုင်းထိုးဖေါက်မှုနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံရေး	(2016)
ရုရှားနိုင်ငံဘက်က အင်တာနက်ကတဆင့် ထိုးဖေါက်မှုလုပ်ရပ်တွေအပေါ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်း တုန့်ပြန်မှု၊ သဘောကွဲလွဲ ချက်တွေဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နှစ်စပိုင်းမှာ အဓိက မကြေလည်မှု တခုအဖြစ် ဆက်ရှိနေပါတယ်။ VOA သတင်းထောက် ...	Created on 02 January 2017	35. ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၉၅ ဦး အမည်စာရင်း ရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင် ထုတ်ပြန်	(2016)
လာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၄ ပါတီက ကိုယ်စား လှယ်လောင်းတွေနဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလောင်း စုစုပေါင်း ၉၅ ဦးရဲ့ အမည်စာရင်းတွေကို ပြည်ထောင် စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ...	Created on 02 January 2017	36. မစိုးရိမ်သံဃာတွေကို တပ်မတော်မိသားစု လှူဒါန်း	(2016)
... လက်ရှိ စာသင်သားသံဃာ ၃ဝဝဝ နီးပါးခန့်ရှိတဲ့ မစိုးရိမ်စာသင်တိုက်ဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာ ထင်ရှားပြီး ခေတ်အဆက်ဆက် ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ မစိုးရိမ်တိုက် ဆရာတော် သံဃာတော်တွေ ဟာ ပြည်သူလူထုဘက်က ...	Created on 01 December 2016	37. ချောင်းဆုံမဲဆန္ဒနယ်မှာ ဒေသခံကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ရွေးချယ်ပေးဖို့ တောင်း	(2016)
... တင်ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီး ဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ မော်လမြိုင်မြို့ခံ ဦးအေးဝင်း ဆိုသူ ကို ရွေးချယ်တင်ပြခဲ့တာဖြစ် တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပါတီဗဟိုက အရည်အချင်းရှိတဲ့သူ နိုင်ငံရေးသမိုင်းရှိတဲ့လူကို ရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်လို့ ...	Created on 30 November 2016	38. ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူပေး ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီ တောင်း ဆို	(2016)
... စီ အစည်းအဝေးကို အမြန်ဆုံးခေါ်ယူကျင်းပပေးဖို့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီက လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ရခို... ရခိုင်ပြည်နယ်က အကြမ်းဖက်မှုတွေ၊ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းက ...	Created on 29 November 2016	39. ကာလုံ အစည်းဝေးခေါ်ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီတချို့ တောင်းဆို	(2016)
အရပ်သား အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ် ဆောင်ရွက်ပုံတွေကြောင့် နိုင်ငံရေး အကြပ်အတည်း ပိုပြီး ကြီးမားသွားနိုင်တာကြောင့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေး အမြန်ဆုံး ခေါ်ဖို့ နိုင်ငံရေး ပါတီ တချို့က ...	Created on 29 November 2016	40. ကြားဖြတ်အတွက် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်း ထုတ်ပြန်	(2016)
... ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ရွေးချယ်ရေးမူတွေနဲ့ မရွေးချယ်ဘဲ နိုင်ငံရေးအရည်အချင်း ရှိသူတွေကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှ... လာမယ့် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ...	Created on 26 November 2016	StartPrev123NextEnd